Al Shabaab oo soo Bandhigtay Magaca iyo Qabiilka uu ka soo Jeedo Wiilkii Isku Qarxiyay Hotel Peace - Hablaha Media Network
HMN:- Ururka Al Shabaab ayaa shaaciyay magaca iyo qabiilka uu u dhashay mid ka mid ahaa raggii fuliyay weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee maalintii Isniinta ahayd ka dhacay Agagaarka Hotel Peace ee Magaalada Muqdisho.
Idaacadda Andalus ee ku hadasha Afka Al Shabaab ayaa laga sii daayay wareysi la sheegay in laga qaaday mid ka mid ahaa raggii fuliyay weerarkaasi Ismiidaaminta ahaa, kaasi oo sheegay magaciisa oo saddexan iyo midka Shabaab dhexdooda looga yaqaanay.
Ninkaan ayaa magaciisa wuxuu ku sheegay inuu yahay Maxamed Abuukar Calasow, Shabaab dhexdiisa waxaa looga yaqaanay Ahlu Sufa.
Al Shabaab ayaa Beesha uu ka dhashay ninkaasi waxa ay ku sheegeen inuu ahaa Abgaal, Daa’uud, kaasi oo naftiisa u huray sida Shabaab ay sheegeen inuu isqarxiyo.
Maxamed ayaa Wareysi laga qaaday waxa uu ku dar daarmay dadka isaga ka dambeeya ee Shabaab ka tirsan inay naftooda u huraan sida uu isaga ugu huray naftiisa, islamarkaana ay la dagaalamaan cadowga alle iyo ciidamada Ajaanibta ah ee dalka ku sugan.
Inkastoo Shabaabku aysan kala cadeyn, wiilkan inuu ahaa kii waday gaariga yar ee koontaroolka ciidanka isku qarxiyay iyo kii waday gaariga weyn midka uu yahay, hadana waxa ay sheegeen labadaasi ruux mid ka mid ah inuu yahay.
Dhalinyaro badan oo la marin habaabiyay ayaa ka tirsan Ururka Al Shabaab, kuwaasi oo lagu guubaabiyo inay naftooda gooyaan, sidoo kalena ay laayaan dad shacab u badan oo Muslimiin ah, iyaga oo loo sheego inay ku galayaan Janada.